नम्बरलाई स्ट्रिङमा रूपान्तरण गर्दछ र त्यसपछि यसको ढाँचा अनुसार ढाँचा गर्दछ जसलाई तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ ।
ढाँचा (नम्बर [,स्ट्रिङको रूपमा ढाँचा ])
नम्बर: सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँ ढाँचा गरिएको स्ट्रिङमा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ।
ढाँचा: स्ट्रिङ जसले नम्बरकोलागि ढाँचा सङ्केत निर्दिष्ट गर्दछ यदिढाँचा लाई छाडेको खण्डमा,ढाँचा प्रकार्यलेStr प्रकार्यले जस्तै कार्य गर्दछ ।
दिएका सूचीहरूले संखेतहरूको वर्णन गर्दछन,जसलाई तपाईँ नम्बरको ढाँचा गर्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
०: यदिनम्बरसँग ढाँचा सङ्केतमा ० को स्थिति डिजिट भएको खण्डमा डिजिट प्रदर्शन हुन्छ अन्यथा ० प्रदर्शन हुन्छ ।
यदिनम्बरले डिजिटहरू पछि ढाँचा सङ्केतमा जेरोहरूको नम्बरको पक्षलिएको खण्डमा (दशमवको दुबै छेऊ मध्ये एक छेउमा), नेत्रित्व दिरहेका वा खोजी रहेका जेरोहरू प्रदर्शन हुन्छन् । दशमलव विभाजकको बायाँमा त्यसपछि ढाँचा सङ्केतमा जेरोहरूको मात्रा नम्बर डिजिटहरू धेरै भएको खण्डमा अतिरिक्त डिजिटहरू बिना ढाँचा प्रदर्शन गरिन्छ ।
शून्यहरूको नम्बरको आधारमा दशमलव स्थानहरूमा नम्बरहरू पुर्ण बानइनछ जसले ढाँचा सङ्केतमा दशमलव विभाजक भन्दा पछाडि उपस्थित हुन्छ ।
#:यदिनम्बरलेढाँचा सङ्केतमा # प्लेसहोल्डरको स्थितिमा डिजिट सम्मिलित भएको खण्डमा, डिजिट प्रदर्शन हुन्छ,अन्यथा यो स्थितिमा केही पनि प्रदर्शन हुँदैन ।
यो प्रतीकले ० को रूपमा काम गर्दछ यसको अलबा यदि ती डिजिटहरूकोनम्बर ढाँचा सङ्केतमा धेरै # क्यारेक्टरहरू भएको खण्डमा नेत्तित्व वा खोजी जेरोहरू प्रदर्शन हुँदैनन् । नम्बरको प्रासङिक डिजिटहरू मात्र प्रदर्शन हुन्छन् ।
.: दशमलव ल्पेसहोल्डरले दशमलव विभाजकको दायाँ र बायाँ दशमलव स्थानहरूको नम्बर निर्धारण गर्दछ ।
यदि ढाँचा सङ्केतले यो प्रतीकको बायाँ तर्फका # प्लेसहोल्डरहरू मात्र सम्मिलित गरेको खण्डमा, नम्बरहरू दशमलव विभाजक पछि १ भन्दाकमबाट सुरु हुन्छन् । खण्डित नम्बरहरू जेरोको नेत्रित्वमा प्रदर्शन गर्नलाई प्राय दशमलव विभाजकको बायाँको पहिलो डिजिटका लागि प्लेसहोल्डरको रूपमा शून्य प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
%: नम्बर ढाँचा कोणमा उपस्थित भएको ठाउँमा १००ले नम्बरलाई गुणन गरेर र (%)चिन्ह घुसाउनुहोस् ।
E- E+ e- e+ : यदि ढाँचा सङ्केतले प्रतीकको E-, E+, e-, or e+,दायाँमा कम्सेकम एक डिजिटको प्लेसहोल्डर(० वा #) सम्मिलित गराएको खण्डमा नम्बर वैज्ञानिक वा अर्थबोधक ढाँचामा ढाँचा गरिइको हुन्छ । E वाeअक्षरलाई नम्बर र घातांकको बीचमा घुसाइन्छ । प्रतीकको दायाँमा डिजिटहरूकोलागि ल्पेसहोल्डरहरूको नम्बरले घातांकमा डिजिटहरूको नम्बर निर्धारण गर्दछ ।
यदि घातांक ऋणात्मक भएको खण्डमा,घटाऊ चिन्ह घातांक भन्दा अगाडि E-, E+, e-, e+ सँग शिधै प्रदर्शन प्रदर्शन गरिन्छ । यदि घातांक धनात्मक भएको खण्डमा घातांकहरू भन्दा अगाडि मात्र E+ वा e+ सँग जोड चिन्ह प्रदर्शन गरिन्छ ।
यदि ढाँचा सङ्केतले डिजिट प्लेसहोल्डरहरू(० वा #)द्वारा संलग्न भएका डेलिमिटरहरू सम्मिलित गराएको खण्डमा हजारौ डेलिमिटर प्रदर्शन हुन्छन् ।
हजारौ नम्बरको रूपमा पूर्ण बिरामको प्रयोग गर्दा दशमलव विभाजक क्षेत्रिय सेटिङमा निर्भर गर्दछ । जब तपाईँ आधारभूत स्रोत सङ्केतमा शिधै नम्बर प्रविष्टि गर्नलाई प्राय दशमलव डेलिमिटरको रूपमा पूर्ण बिरामको प्रयोहुन्छ । तपाईँको प्रणाली सेटिङहरूमा वास्तविक क्यारेक्टरहरू नम्बर ढाँचामा दशमलव विभाजकको रूपमा प्रदर्शित हुन्छन् ।
- + $ ( ) खाली स्थान: जोड (+), घटाऊ (-), डलर ($), खाली स्थान,वा ढाँचा सङ्केतमा शिधै प्रविष्टि भएका कोष्ठकहरूले शाब्दिक क्यारेक्टरको रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्छन् ।
यहाँ एकपटक पनि सूचीकृत नभएका क्यारेक्टरहरू प्रदर्शन गर्नलाई यसलाई ब्याक स्ल्यास(\_)द्वारा अगाडि बढाउनु पर्दछ वा यसलाई उद्गार चिन्हहरूमा (" ") संलग्न गर्नु पर्दछ ।
\_:ब्याक स्ल्यासले ढाँचा सङ्केतमा अर्को क्यारेक्टर प्रदर्शन गर्दछ ।
यदि ब्याक स्ल्यासद्वारा तिनीहरूलाई अगाडि बढाएको खण्डमा ढाँचा सङ्केतमा विशेष अर्थ भएका क्यारेक्टरहरूले शाब्दिक क्यारेक्टरहरूको रूपमामात्र प्रदर्शन गर्न सक्छन् । ब्याक स्ल्यास योआफै प्रदर्शन हुँदैन यो नभएमा तपाईँनै ढाँचा सङ्केतमा डवल ब्याक स्ल्यास(\_\_)प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
शाव्दिक क्यारेक्टरहरूका रूपमा प्रदर्शन गर्नकालागि ढाँचा सङ्केतमा क्यारेक्टरहरूका अगाडि ब्याकस्ल्यास आउन जरुरी हुन्छ,यस्ता क्यारेक्टरहरूमा मिति- र समय-ढाँचा क्यारेक्टरहरू(a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :),सङ्ख्यात्मक ढाँचा क्यारेक्टरहरू (#, 0, %, E, e, अल्पविराम, पूर्ण बिराम) र स्ट्रिङ ढाँचा क्यारेक्टरहरू (@, &, <, >, !)पर्दछन् ।
तपाईँ दिएका पूर्वपरिभाषित नम्बर ढाँचाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।"साधारण नम्बर"लाई छाड्नुको सट्टा सबै पूर्वपरिभाषित नम्बर ढाँचा सङ्केतहरूले दशमलव नम्बरको रूपमा दुईटा दशमलव स्थानहरूमा नम्बर फर्काउँछ ।
तपाईँले पूर्वपरिभाषित ढाँढाहरू प्रयोग गरेको खण्डमा ढाँचाको मान उद्गार चिन्हमा संलग्न गराउन जरुरी हुन्छ ।
साधारण नम्बर: प्रविष्टि गरिएको स्वरूपमा नम्बरहरू प्रदर्शन हुन्छन् ।
मुद्रा: डलर चिन्ह नम्बरको अगाडिपट्टी घुसाउछ र कोष्ठकहरूमा ऋणात्मक नम्बरहरू संलग्न गराउछ ।
स्थिर: ले दशमलव विभाजकको अगाडि कम्सेकम एक डिजिटमा प्रदर्शन गर्दछ ।
स्थिर: ले हजारौ नम्बरहरूको विभाजकसँग नम्बरहरू प्रदर्शन गर्दछ ।
प्रतिशत: १००ले नम्बरलाई गुणन गर्दछ र नम्बरमा प्रतिशत चिन्ह जोडिन्छ ।
वैज्ञानिक: ले वैज्ञानिकढाँचामा(उदाहरणकोलागि,१.००E+०३ देखि १०००सम्म), संख्यहरू प्रदर्शन गर्दछ ।
ढाँचा सङ्केतलेलाई तीनवटा सेक्सनहरूमा बिभाजन गर्न सकिन्छ जसलाई अर्धविरामद्वारा बिभाजन गरिन्छ । पहिलो भागलाई धनात्मक मानका लागि दोस्रो भागलाई ऋणात्मक मानका लागि र तेस्रो भागलाई ० कोलागि ढाँचा परिभाषित गर्दछ । यदि तपाईँले एउटै मात्र ढाँचा सङ्केत निर्दिष्ट गरेको खण्डमा यो सबै नम्बरहरूमा लागू हुन्छ ।
तपाइँले ढाँचा संख्या, मितिहरू र मुद्राहरू LibreOffice आधारभूतमा नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न प्रयोग गरिएको स्थान सेट गर्न सक्नुहुन्छ LibreOffice - प्राथमिकताहरूउपकरणहरू - विकल्पहरू- भाषा सेटिङहरू - भाषाहरूआधारभूत ढाँचा कोडहरूमा, दशमलव बिन्दु(.)सधै प्लेसहोल्डरको दशमलव विभाजकका रूपमा प्रयोग गरिन्छ तपाईंको स्थानीयमा परिभाषित गरिएको र यसको क्यारेक्टरद्वारा प्रतिस्थापित गरिनेछ।
मिति समय र मौद्रिक ढाँचाहरूका लागि उस्तै स्थानिय सेटिङहरू लागू हुन्छ । आधारभूत ढाँचा सङ्केत तपाईँको स्थानिय सेटिङ आनुसार वर्णन र प्रदर्शन गरिनेछ ।
' तपाईँले BASIC स्रोत सङ्केतमा नम्बरहरूको प्रविष्टि गराउदा प्राय जसो दशमलव डेलिमिटरको रूपमा पूर्ण बिरामको प्रयोग गर्दछ।
REM ले प्रदर्शन गर्दछ उदाहरणका लागि 6,328.20 अंग्रजी स्थानियमा, 6.328,20 जर्मन स्थानियमा ।